Otu esi eme mkparịta ụka nke ọma na ndị na-emetụta | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 30, 2021 Na Mọnde, Nọmba 30, 2021 Alexander Frolov
Ịre ahịa na-emetụta ngwa ngwa aghọwo akụkụ kachasị mkpa nke mgbasa ozi ika ọ bụla na-aga nke ọma, na-eru uru ahịa nke $ 13.8 ijeri 2021, na ọnụ ọgụgụ ahụ a na-atụ anya na ọ ga-eto. Afọ nke abụọ nke ọrịa COVID-19 gara n'ihu na-emewanyewanye ewu ewu nke azụmaahịa influencer ka ndị na-azụ ahịa nọgidere na-adabere na ịzụ ahịa n'ịntanetị ma na-abawanye ojiji ha na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta dị ka ikpo okwu e-azụmahịa.
Na nyiwe dị ka Instagram, na nso nso a TikTok, Mmejuputa atumatu nke ha na-elekọta mmadụ azụmahịa atụmatụ, e nwere ohere ọhụrụ apụta maka ụdị iji tinye influencers ka augment ha na-elekọta mmadụ azụmahịa azum.
70% nke ndị ọrụ ịntanetị US nwere ike zụta ngwaahịa sitere n'aka ndị na-eme ihe ha na-eso, yana ịrị elu ahịa azụmaahịa US na-atụ anya site na ngụkọta nke 35.8% ihe karịrị ijeri $36 na 2021.
ọnụ ọgụgụ na Insider ọgụgụ isi
Mana site na ohere nkwado na-eto eto maka ndị na-eme ihe, ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere na nbata ga-abanye n'ime oghere juru eju, na-eme ka ọ sie ike karị maka ụdị ụdị ịchọta ezigbo influencer ga-arụ ọrụ. Na maka mmekọrịta mmetụta-ụdị ka ọ bụrụ nke kachasị dị irè nye ndị na-ege ntị lekwasịrị anya, ọ dị oke mkpa maka mmekọ ka ọ bụrụ ezigbo, dabere na mmasị, ebumnuche, na ụdị. Ndị na-eso ụzọ nwere ike ịhụ ngwa ngwa site na akwụkwọ nkwado na-akwadoghị nke sitere na ndị na-eme ihe ma n'otu oge ahụ, ndị na-eme ihe na-enwekwa okomoko nke ịkwụsị azụmahịa nkwado na-adabaghị na akara nke ha.
Maka ika iji guzobe mmekọrịta dị ogologo oge na ndị na-eme ihe kacha mma maka mkpọsa ha, n'ihe gbasara aha na ROI, ha kwesịrị iburu ndụmọdụ ndị a n'uche mgbe ha na-agwa ndị na-eme ihe ike ha kacha amasị:
Nyochaa ihe mmetụta tupu ị nweta
Jiri ngwaọrụ nyocha na nghọta iji chọpụta ndị na-eme ihe na-emetụta ndị na-ege gị ntị ma mekọrịtara ya na ika gị. 51% nke ndị na-eme ihe nkiri na-ekwu na isi ihe kpatara na ha anaghị emekọrịta ihe na ika na-abịakwute ha bụ nke ahụ ha anaghị amasị ma ọ bụ jiri ika ahụ kpọrọ ihe. Ịmepụta ndepụta nke ndị na-eme ihe na-emetụta ụkpụrụ nke ika ga-enwe mmetụta kachasị mma na mgbasa ozi, n'ihi na posts ha ga-abụ eziokwu karịa ndị na-ege ha ntị, yana ha nwere ike iso gị rụọ ọrụ na mbụ.
Ụdị kwesịrị ịdị uchu n'ịtụle ogo ndị na-ege ntị nke mmetụta n'ihi na enwere ọtụtụ akaụntụ nwere ike ịnwe ndị na-eso ụzọ na-abụghị eziokwu. A na-atụ anya na 45% nke akaụntụ Instagram zuru ụwa ọnụ ga-abụ bots ma ọ bụ akaụntụ anaghị arụ ọrụ, Ya mere, nyochaa ihe influencers' na-eso ụzọ maka ezigbo ndị na-eso ụzọ nwere ike hụ na mmefu ego ọ bụla emefuru ruru ezigbo ndị ahịa.
Hazie ozi gị nkeonwe
Ndị na-emetụta mmetụta enweghị ndidi, ma ọ bụ na ha ekwesịghị, mgbe a bịara n'ịbịakwute ụdị ụdị nwere ozi ụdị, bee na mado, na-enweghị ahaziri ha ma ọ bụ ikpo okwu ha. 43% kwuru na ha anatabeghị ozi ahaziri ahazi ma ọ bụ adịkarịghị sitere na ụdị, yana n'ụba nke ozi influencers na-ekekọrịta n'ịntanetị, ụdị nwere ike iji nke a mee ihe n'ụzọ dị mfe iji hazie ọkwa ha.
Ụdị kwesịrị itinye oge na ume n'ịgụ ihe site na ọdịnaya ndị na-eme ihe ike ha dị mma iji chepụta ozi ahaziri maka ndị na-eme ihe ọ bụla, dabara ụda na ụdị ha. Nke a ga-abawanye ohere na onye na-eme ihe a na-ajụ ga-ekwenye na mmekorita, ma nweekwa mkpali karịa biputere ọdịnaya na-etinye aka.
Mee ka o doo anya na mgbasa ozi mbụ gị
Akụla ohia gburugburu - idoanya, na nghọta bụ isi mgbe ị na-atụpụta usoro mmekọrịta gị na onye na-eme ihe ike. Mgbe ị na-eduzi mgbasa ozi mbụ gị, jide n'aka na ị ga-edozi usoro ahụ n'ihu gụnyere nkọwa dị mkpa dị ka ihe ngwaahịa ahụ bụ, usoro oge maka ikesa, mmefu ego, na ihe ndị a tụrụ anya ya. Nke a na-enyere onye na-eme ihe ike aka ime mkpebi mara mma, ngwa ngwa ma na-enye ohere ka akụkụ abụọ ahụ zere esemokwu n'ihu n'okporo ụzọ.
Ọ dị oke mkpa na ụdị na-akụ ụda ziri ezi na nzikọrịta ozi ha ka ndị na-eme ihe na-amasị ya nweta ka ha wee nweta mmekọrita bara uru, ezigbo ya na mgbasa ozi ahịa ha ka mma. Ka ụlọ ọrụ na-ere ahịa influencer na-aga n'ihu na-aga n'ihu, ụdị ga-adị mkpa iji ya mee mgbanwe.
Tags: otúotú e si ekwurịta okwu na influencersotu esi eme ka influencermamainfluencerahịa ahịa